Paul Scholes Oo Magacaabay Xiddig Uu Rumaysan Yahay Inuu Gaadhi Doono Heerkii Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo - Gool24.Net
Paul Scholes Oo Magacaabay Xiddig Uu Rumaysan Yahay Inuu Gaadhi Doono Heerkii Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo
Halyeyga Manchester United ee Manchester United ee Paul Scholes ayaa magacaabay laacib da’yar oo ku socda inuu gaadho heerkii Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo dunida soo haysay in 15kii sannadood ee ugu dambeeyey, isla markaana kusoo kala guuleystay lix jeer iyo shan mar abaal-marinta xiddiga dunida ee Ballon d’Or.
Paul Scholes waxa uu sheegay in laacibka da’da yar ee afka hore uga ciyaara Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Norway ee Erling Haaland oo 20 jir ah uu ka mid noqon doono ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida.
Gool-dhaliyana cajiibka ah oo xili ciyaareedkii hore wacdaro ka dhigay garoomada ayaa isaga iyo labada ciyaartoy ee kale ee Kylian Mbappe iyo Jadon Sancho lagu tilmaamaa inay noqon doonaan xiddigo waaweyn oo beddeli doona Ronaldo iyo Messi.
Haaland ayaa waxa uu soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn markii uu goolal tiro badan oo layaab lahaa u dhaliyey kooxda RB Leipzig, waxaana markiiba ku loollamay naadiyo tiro badan oo ugu dambayntiina ay Borussia Dortmund kaga guuleysatay saxeexiisa.
Paul Scholes ayaa amaan u jeediyey Erling Haaland, waxaana uu sheegay inuu rumaysan yahay inuu leeyahay astaamihii uu ku gaadhi lahaa heerka kabtanka Barcelona ee Lionel Messi iyo xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo.
45 jirkan reer England oo ka hadlayay Erling Haaland ayaa yidhi: “Waxay ila tahay in Haaland uu yahay mid cajiib ah. Waxay ila tahay inuu gaadhi doono heerka sare ee Ronaldo-hiina iyo Messi-giina, marka laga eego sida uu hadda u muuqdo.”
Paul Scholes waxa uu sheegay in Sancho aanu heerkaas oo kale gaadhsiinayn, waxaanu yidhi: “Waa tan sababta aanan marnaba u dareemin in Sancho uu yahay ciyaartoy noocaas oo kale ah, waxaanaynu hore u aragnay saddex laacib oo heerkan ah.”
Erling Haaland ayaa xulka qaranka Norway waxa uu u dhaliyey saddexlay kulankii ay 4-0 ku xasuuqeen Romania Axaddii, waxaana laba ka mid ah goolashaa ka caawiyey laacibka khadka dhexe ee Real Madrid ee Martin Odegaard.